Bogga ugu weyn Halkee laga Iibsan karaa Kaararka Hadiyada ee Costco sanadka 2022
Bakhaarada Costco waxay caan ku yihiin qiimahooda aadka u hooseeya hadday ka iibsanayaan alaabada elektiroonigga ah, alaabta guriga, badeecooyinka gaarka ah ama xitaa dukaamada. Kaararka hadyada ee Costco waa beddelka wanaagsan ee qaadista kaadhadhka caddaanka ah ama kaararka deynta sababtoo ah waligood ma dhacayaan, waana lagu dallaci karaa.
Si kastaba ha ahaatee, si aad dammaanad uga hesho kaydadkaaga, waxaad u baahan doontaa inaad iibsato xubinnimada Costco sannadkii. Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan tahay xubinnimo si ay kuugu suurtagasho inaad iibsato kaararka hadyada ee Costco. Nasiib darro, shuruudahan awgeed, Costco kama iibiso kaararkeeda hadiyadda iyada oo loo marayo tafaariiqleyaasha qolo saddexaad sida Target, Walmart ama Kroger.
Aynu ogaano halka aad ka iibsan karto kaadhadhka hadyada ee Costco.
Xubin ka ah Costco ahaan, waxaad ka iibsan kartaa kaararka hadiyadda gudaha bakhaarka Costco, oo ku yaal diiwaan kasta ama mid ka mid ah kaadhka hadyada ee taagan dhammaan bakhaarka. Ogow midkee Bakhaarka Costco waa kuu dhow.
2. Websaydhka Costco
Haddii aadan taageere u ahayn iibsashada jireed, waxaad weli ka dalban kartaa kaararka hadiyadda ee Costco onlayn adigoo si fudud u booqanaya Costco.com. Sidoo kale, doorashadani waxay shaqeysaa haddii aadan ku lahayn bakhaar Costco agtaada ama haddii aad rabto inaad qof hadiyad ahaan ugu soo iibiso kaarka.
Si aad uga dalbato kaarka hadyada ee Costco onlayn, raac talaabooyinkan:
Booqo Costco website.
Gal akoonkaaga ama samee akoon haddii aadan weli mid lahayn.
Ka raadi "Costco Shop Card".
Dooro Shayga Dukaanka Costco oo dooro qaddarka ($25-200) ee aad jeceshahay inaad ku darto kaarka.
Dooro "ku dar gaarigaaga".
Guji "cartkaaga" ee ku yaala geeska midig ee sare oo Checkout.
Kaararka hadyada Costco waxaa lagu soo rari doonaa inta u dhaxaysa 7-10 maalmood oo shaqo ciwaanka aad ku sheegtay dalabkaaga. Dhoofintu waa eber dheelitiran. Markaad hesho kaarka, wac lambarka bilaashka ah ee uu ku jiro kaadhkaaga si aad u dhaqaajiso. Xubin ahaan, waxaad dib ugu shuban kartaa kaadhadhka hadyada Costco bakhaar kasta oo Costco ah.
Haddii bakhaarka Costco ama ku sugitaanka rarida uu ku shaqayn waayo, waxaad weli ka heli kartaa kaararka hadyada Costco ee goobaha sida Amazon or Arbacada ah. Maadaama aadan u baahnayn xubinnimada Costco si aad u soo furato kaarka hadiyadda, shakhsiyaadka ayaa iibsan doona ka dibna ku iibin doona onlayn, laakiin lacag dheeraad ah.
XIDHIIDHKA: Sida looga baxo deynta kaadhka deynta 2022
Si kastaba ha ahaatee waxaad u baahan tahay inaad ka taxadarto iibsashada dib u iibinta sababtoo ah ma haysatid dammaanad ah in lacagtu dhab ahaantii ku jirto kaarka.
Haddii ay dhacdo in aad rabto in aad ka soo furato Costco Gift Card onlayn, wali waad samayn kartaa haddii aad xubin tahay iyo haddii kale. Kadib markaad wax ka iibsanayso khadka, raac tillaabooyinka hoose:
Dooro "cart" si aad u hubiso.
Marka la hubinayo, dooro "ku dar" qaybta Kaarka Dukaanka Costco.
Geli lambarkaaga kaadhka hadiyadda ee Costco oo ku yaal dhabarka kaadhkaaga.
Geli lambarka amniga ee 4-god ee sidoo kale ku yaal dhabarka kaadhkaaga.
Kaararka qaar waxa laga yaabaa inay lahaadaan sifo ammaan oo qalin ah oo daboolaysa PIN kaaga 4-god ah. Kaliya xoq astaanta amniga si aad u gasho lambarkaaga PIN.
Qadarka ku hadhay kaadhkaaga waxa laga jarayaa hadhaaga kaadhka hadyada. Haddii aad weli lacag ku haysato kaarka hadiyadda ka dib iibsashada, hadhaagaada hadhay waxa la soo bandhigi doonaa ka dib hubinta.
Haddii aad isticmaashid dhammaan lacagta ku hadhay kaadhka hadiyadda, waxaad u baahan doontaa inaad gashid qaab lacag bixineed labaad si aad u bixiso wadarta inta hadhay. Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado in aad dib ugu shubi karto lacagta kaadhka hadyada Costco ee diiwaanka bakhaar kasta oo Costco ah, laakiin maaha online.
Akhri wax dheeraad ah: Ma Ku Iibsan Kartaa Kaararka Hadiyada Kaarka Amaahda? Ogow Sida
Dadka aan xubnaha ka ahayn ma isticmaali karaan kaararka hadiyadda ee Costco?
Haa Inkasta oo xubnaha Costco kaliya ay iibsan karaan kaadhadhka hadyada ee Costco, xubnaha aan xubinta ka ahayn ayaa wali isticmaali kara kaararka. Xubin la'aan ahaan, waxaad isticmaali kartaa Costco kaararka hadiyadda si aad uga dukaameysato meel kasta oo Costco ah oo ku taal Mareykanka, Kanada, ama Puerto Rico iyo sidoo kale onlineka Costco.com iyo Costco.ca. Waxaad u baahan tahay inaad tusto kaarka hadyada ee Costco albaabka (oo ay ku jirto dheelitirnaan) waxaana laguu oggolaan doonaa inaad gasho dukaanka.
Waa maxay sababta aan si toos ah uga iibsanayo kaararka hadiyadda Costco Costco inta aan sidaas ku samayn karo Amazon ama eBay?
Iibsashada kaadhadhka hadyada ee Costco si toos ah Costco waxay kuu xaqiijinaysaa eber kharashyo dheeri ah oo kaadhadhka hadyada waxay had iyo jeer ahaan doonaan kayd. Waxaa dheer, waxaad fursad u heleysaa inaad ku badbaadiso dhowr dollar kaararka hadiyadda ee Costco iyada oo loo marayo takhasuskooda caadiga ah ee Costco ee xubnaha.
Dhammaan waxa la sheegay oo la sameeyay, iibsashada kaararka hadiyadda ee Costco si toos ah Costco waa ikhtiyaarka ugu xikmad badan oo la hubo. Waxaad ka iibsan kartaa kaadhadhka hadyada ee madaahibta laga bilaabo $25 ilaa $2,000 gudaha Dukaamada Costco ama khadka tooska ah.
XIDHIIDHKA: Halkee laga Iibsan karaa Kaararka Hadiyada ee Bartilmaameedka 2022
Kaararka hadyada Costco ma lagu soo furan karaa lacag caddaan ah?
Waa inaad isticmaashaa kaadhka hadyada si aad u iibsato badeecad, sababtoo ah Costco kaadhadhka hadyada (jidhka iyo dhijitaalka ah) laguma soo furan karo lacag caddaan ah, marka laga reebo sida sharcigu farayo.
Soo hel gobollo u oggolaanaya lacag caddaan ah in dib loo soo celiyo marka hadhaagaagu uu ka hooseeyo qaddar go'an oo ka yimid website ka costco.com.
Sideen dib ugu soo dejiyaa kaarka hadyada ee Costco?
Nasiib darro xilligan, ma jirto qaab dib loogu soo dejiyo kaarka hadyada Costco onlayn. Markaa waa inaad ka joogsato Costco deegaankaaga oo aad waydiiso shaqaale inuu kaa caawiyo dib u soo dejinta Kaadhka Lacagta.
Ma kharash garayn karaa wax ka badan Kaarka Hadiyada ee Costco?
Haa Si kastaba ha ahaatee, siyaasadda Costco waxay sheegaysaa inaad marka hore isticmaasho kaarka hadiyadda ka dibna aad isticmaasho lacag caddaan ah ama debit inta ka hartay baaqiga. Qaar ka mid ah kormeerayaasha ayaa kuu sheegi doona inaad u baahan tahay inaad kaash ku bixiso hadhaaga kaadhka hadiyadda, laakiin tani maahan siyaasad.
Sideen u hubin karaa dheelitirka kaadhka hadyada ee Costco?
Inkasta oo ay yihiin hab cajiib ah oo lacag lagu badbaadiyo, kaararka hadiyaddu waxay la yimaadaan dhibtooda sidoo kale, mid ka mid ah taas oo ah ilaalinta dheelitirka. Nasiib wanaag, aad ayey u fududahay oo ku habboon tahay in la hubiyo dheelitirka kaadhka hadiyadda ee internetka.
Kaadhadhka Hadiyada Costco miyay dhacayaan?
Kaararka Hadiyadaha Costco weligood ma dhacayaan waxaana dib loogu rari karaa lacag caddaan ah meel kasta oo bakhaar ah oo Costco ah. Sidoo kale laguma soo furan karo lacag caddaan ah ilaa sharcigu u baahan yahay mooyee tanina way ku kala duwan tahay gobolka.
Waxaad hubin kartaa hadhaaga hadhyada kaadhkaga hadyada Websaydhka Costco. Marka hore, hoosta ciwaanka "Adeegga Macmiilka", oo u dhow xagga hoose ee bogga hoyga, dooro "Hadhaaga Kaarka Dukaanka Costco".
Marka xigta, geli lambarka kaadhka hadyada iyo biinka 4-god, labaduba waxay ku yaalliin dhabarka kaadhkaaga. Kadib markaad doorato "hubi dheelitirka", wadarta hadhaaga kaadhkaga ayaa isla markiiba la soo bandhigi doonaa.
Maxaan sameeyaa haddii kaadhka hadyada la iga lumo ama la xado?
Nasiib darro, Costco mas'uul kama aha kaadhadhka hadyada ee lumay ama la xado, sidaas awgeedna lama beddeli karo. Si kastaba ha noqotee, haddii aad meel dhigto kaadhadhkaaga hadiyadda ah ee Costco, waxaad u baahan tahay inaad gujiso isku xirka iimaylka asalka ah si aad u gasho. Haddii aadan haysan iimaylkii asalka ahaa, la xidhiidh Costco hagitaan dheeraad ah.
XIDHIIDHKA: Waa maxay APR Wanaagsan ee Kaarka Daynta? Sidee bay u shaqeysaa?
Ma ii siin kartaa xubinnimada Costco?
Xubnaha Costco waxay qof siin karaan Xubinnimada Xiddiga Dahabka ah iyagoo ka iibsanaya kaarka "Hadiyada Xubinnimada" bakhaarka Costco ama mareegta Costco. Kaarka waxa uu ku kacayaa $60 xubinnimada Hal-sano ee Xiddiga Dahabka ah waxaana dib u cusboonaysiin kara qaataha dhamaadka sanadka.
Xubnaha Costco waxa kale oo ay qof siin karaan xubin ka ahaanshaha gaarka ah iyaga oo iibsanaya laba kaadh oo ah "Hadiyada Xubinnimada" oo dhan $120. Hadyada waxa ay soo furan kartaa labada kaadhka hadyada ee Xubinnimada Gaarka ah.
Qaataha kaadhka "Hadiyada Xubinnimada" waa inuu booqdo bakhaarka Costco si uu uga soo furto xubinimadiisa miiska xubinimada. Xubinimada xubinimadu waxay ku beddelan doontaa kaadhka hadyada kaadhka xubinnimada Xiddiga Dahabka ah.
Haddii qaataha hore u ahaa xubin Costco, waxay isticmaali karaan kaarka "Hibada Xubinnimada" si ay u cusboonaysiiyaan xubinimadooda ama u cusboonaysiiyaan Xubinnimada Fulinta.
Miyaan ku wareejin karaa baaqiga kaadhka hadyada dhijitaalka ah kaadhka hadyada jirka?
Haa Waxaad u qaadan kartaa kaarka hadiyadda Costco ee bakhaarka xaafaddaada, halkaas oo aad ku iibsan karto kaarka hadyada jirka ee qiimaha la mid ah.
Costco ma leeyahay kaararka hadiyadda makhaayadda?
Xubnaha Costco waxay iibsan karaan kaadhadhka hadiyadaha makhaayadda ee la dhimay ee ku yaal goobta kaadhka hadyada ee bakhaarka Costco ama onlayn. Waxay ku iibiyaan meel kasta 1-5 kaarar hadyad makhaayad ah oo baakidh ah oo qiimo jaban ah.
Bakhaarka Costco ee deegaankaaga ayaa inta badan kaadhadh hadiyadeed u sidi doona makhaayadaha kuu dhow. Waxaad ka iibsan kartaa xirmo kasta oo kaadhka hadiyadda ah ee internetka ee makhaayadaha oo ay ku jiraan O'Charley's Restaurant iyo Bar, Daniel's Broiler Restaurant, Texas de Brazil, Sullivan's Steakhouse Restaurant, California Pizza Kitchen, Peet's Coffee & Shaaha, in la xuso dhowr.
Waa maxay Kaararka Hadiyada Makhaayada ee laga heli karo Costco?
19 Siyaabood oo Loogu Heli Karo Xubinnimada Costco Lacag La'aan 2022
15 goobood oo aad ku iibsan karto kaadhadhka hadiyadaha ee la dhimay
5 Meelood oo aad ka iibsan karto Kaadhadhka Hadiyada Roblox
Bangiyada ugu Fiican ee Amaahda Shakhsi ahaaneed 2022
Waa Kuma Ciyaartoyga NBA-da Lacagaha Ugu Badan?
Kaarka hadiyadda waxaa mararka qaarkood loo arkaa hadyad caajis ah, laakiin waxa fiican in la bixiyo hadiyad...
Ma ku Bixin Kartaa Kaarka Daynta | 2022
Ururinta deynta kaarka deynta ayaa ah jiir simbiriirixan oo hoos loo dhigi karo. Iyadoo ay jiraan xalal badan oo caadi ah oo loogu talagalay…
Sida Loo Helo Kaarka Nabadsugida Bulshada | 2022
Haysashada kaadhka badbaadada bulshada iyo tiradu waa muhiimada ugu wayn maalmahan iyo wakhtiyadan. Waxa…
Kahor intaadan isticmaalin kaarka deynta si aad u heshid hormaris lacageed, waa inaad ogaataa ujrada iyo khataraha,...
Victoria's Secret waa shirkad Maraykan ah oo tafaariiqda alaabooyinka quruxda badan sida lingeriyada, dharka, iwm. Laga bilaabo 2021,…
Halkee laga Iibsan karaa Kaararka Hadiyada ee Bartilmaameedka 2022
Bartilmaameedka waa mid ka mid ah goobaha ugu fiican ee laga helo kaararka hadiyadda. Taasi waa sababta, marka lagu daro goobta-…